Tekisi yeramangwana chikamu chezvino (II): Lyft | IPhone nhau
Tekisi yeramangwana chikamu chezvino (II): Lyft
Vamwe vanoti kana iwe usingakwanise kukunda muvengi, unofanira kubatana naye. Lyft yakave nemikana yakati wandei yekubatana neUber uye kuisa hondo ye iwo maviri titans etekisi 2.0, asi yakagara ichiramba mukana iwoyo uye kubva kune yayo dome yakaramba ichibheja pamisangano ine hukasha yekushambadzira, kukura kugura Kwese uye nebasa chairo rakanaka.
1 Kwikwidza chero mutengo
2 Pasina matambudziko
Kwikwidza chero mutengo
Kana paine chimwe chinhu chakaratidza Lyft, ndiwo makwikwi anotyisa aakaita pamusoro peUber. Izvi zvakakonzera kurasikirwa kwemamirioni-emadhora pamutengo we kukurudzirwa kukuru uye zvakawanda zvinokurudzira vatyairi, chimwe chinhu chakaratidzika kunge chisina basa zvakanyanya kuvashambadziri nekuda kwekuti kambani yepepuru yakakwanisa kuramba ichikura muhuwandu hwevashandisi mwedzi wega uye kuzvisimbisa sesarudzo yechipiri muUnited States.
Uye icho ndicho chimwe chezvinhu zvekutanga zvatinofanira kufunga nezvazvo naLyft: kwechinguva Inongoshanda chete muNorth America nyika. Zvirongwa zvekuwedzera kwechikumbiro izvi hazvina kunge zvichishuvira senge zveUber, uye kunyangwe hazvo iyo CEO yakataura kakawanda pamusoro pekuwedzera kweEuropean, chokwadi ndechekuti munguva pfupi hazviratidzike kuti tichazviona.
Iyo yeLyft app zviri nyore kwazvoMuchokwadi, inogona kunge iine yakapusa interface yezvose zvatichaona mune izvi miniseries zvekutarisa. Netoni inotozivikanwa yepinkish seyakakurisa muchimiro, tinowana mepu uye mamwe mabhokisi ekuzadza nekwatakabva nekwatiri kuenda, pamwe nemukana wekusarudza pakati pesarudzo dzerwendo rwekutanga: Mutsara (kugovana mota uye kuchengetedza ), Lyft (yakajairwa), Uyezve (ine zvigaro zvitanhatu) uye Premier (mota dzemhando yepamusoro dzine zvigaro zveganda). Iyo Line inonyanya kufadza sezvo mutengo wakatemwa uye kunyangwe isu tisingagovane mota, isu tichagara tichibhadhara yakaderera pane yakajairwa Lyft.
Zvese izvi zvakarongedzwa nenguva dzinonzwisisika dzekutora mumaguta eUS kwandakakwanisa kuyedza, pamwe neyakajeka mushandisi ruzivo. Kupedza basa uye sekutaura kwatamboita, Ridhi inopa kushambadzira kwakanyanya, chimwe chinhu chatinogona kubatsirwa nacho sevashandisi.
Sezvo nemamwe maapplication, unogona kubatsirwa kubva tora zvemahara pakunyoresa uchishandisa iyi link (Huwandu hwacho hunosiyana zvinoenderana nezuva, kunyangwe rinowanzo shanduka pakati pemakumi maviri nemashanu emadhora), kana neimwe nzira unogona kugadzira kunyoreswa pasina kushambadzira kiredhiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Tekisi yeramangwana chikamu chezvino (II): Lyft
Android Wear 2.0 inosvika neiyo LG Yekutarisa Sisitimu uye Yekutarisa Sport yakagadzirirwa neGoogle